ထုံးစံအိမ်ပရိဘောဂ, ထမင်းစားခန်းပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူ | NuTrend ပရိဘောဂ
သိုလှောင်မှု 502145 အတွက်6ဆင့်ခေတ်ပြိုင်သတ္တုနှင့်သစ်သားစာအုပ်စင်
၁။ သိုလှောင်ရန်အတွက် Tier Contemporary Metal နှင့် Wood Bookshelf ။2. အရွယ်အစား: L30xD30xH162cm / 11.8''x11.8''x63.8 '' ။၃။ အနက်ရောင်ပြီးပြည့်စုံသောခိုင်ခံ့သောသတ္တုကိုယ်ထည်သည်ခိုင်ခံ့သောရပ်တည်မှုနှင့်မျှတသောအထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။4. မှောင်မိုက်သစ်သားစင်ပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်တောကြည့်ရှုဖန်တီး။(၅) X-stretchers များသည်စာအုပ်များကိုစာအုပ်များပြုတ်ကျခြင်းမှကာကွယ်ပေးသောသာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောပုံပန်းသဏ္bringာန်တစ်ခုဆောင်ယူလာသည်။အခန်းတစ်ခန်းကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်အောင်ဘယ်ထောင့်မှာမဆိုအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေသည်။
သိုလှောင်မှု 502160 အတွက်4ဆင့်ခေတ်ပြိုင်သစ်သားစာအုပ်စင်
၁။ သိုလှောင်ရန်အတွက် Tier Contemporary Wood Bookshelf ။2. အရွယ်အစား: L80xD29xH120cm / 31.5''x11.4''x47.2 '' ။၃။ ၄ လွှာကျယ်သောစင်များကသင်လိုအပ်သောသိုလှောင်မှုနေရာအားလုံးကိုပေးသည်။၄။ T25mm အထူထောင့်ထိပ်ရှိပရိုဖိုင်းအလှဆင်ခြင်း။(၅) 40x25mm ကြာရှည်ခံနိုင်သောခြေထောက်သည်သင့်အိမ်အလှဆင်မှုများအတွက်မျှတသောအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။၆။ မျက်မှောက်ခေတ် X-stretchers များသည်စာအုပ်များအားကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသောသာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောအိမ်ကိုကြည့်ရှုစေသည်။7. ဘယ်နေရာမှာမဆိုသိုလှောင်မှုအတွက်ကောင်းစွာအရွယ်အစား။
အံဆွဲ Living ည့်ခန်းသုံးပရိဘောဂ 203505 ပါ ၀ င်သည့်ခေတ်သစ်ကျဉ်းမြောင်းသောသစ်သားခုံပုံခုံ
၁။ ခေတ်ပြိုင်ကျဉ်းမြောင်းသောသစ်သားခလုတ်ခုံများနှင့်အံဆွဲ Living ည့်ခန်းသုံးပရိဘောဂများပါ ၀ င်သည်။2. အရွယ်အစား: L86.6xD30xH80cm / 34.1''x11.8''x31.5 '' ။(၃) MDF မှထုတ်လုပ်ထားသောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဆိုင်သောဆေးသုတ်ဆေးနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။4. အလှဆင်ထားသော A-stretchers နှင့်အတူဘောင်။5. ကျယ်ဝန်းသောအံဆွဲနှစ်ခုနှင့်နိမ့်စင်ပေါ်toရိယာကြောင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ။နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံအလှဆင်အတွက်ရရှိနိုင် 6. ။
Living ည့်ခန်း ၂၀၃၃၇ အတွက်ခေတ်မီ Accent ဆိုဖာစားပွဲ
၁။ Living ည့်ခန်းအတွက်ခေတ်မီ Accent ဆိုဖာစားပွဲ2. အရွယ်အစား: L45xD35xH60cm / 17.7''x13.8''x23.6 ''၃။ အဖြူရောင်ခြယ်ထားသောကိုယ်ထည်ကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ကြံ့ခိုင်သော T25mm ပိတ်ပင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောနံရံကပ်အင်္ကျီထိပ်၄.၅ * ၄.၅ စင်တီမီတာကောင်းသောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ခိုင်ခံ့သောရပ်တည်မှုအတွက်ခြေထောက်များကျစ်လစ်သောအံဆွဲနှင့်ကျယ်ဝန်းသည့်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းtoရိယာကြောင့် ၅။ သိုလှောင်ရန်နေရာများစွာ၆။ ကြာရှည်ခံသည့်သတ္တုလျှောများနှင့်လက်ကိုင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောနှေးနှေးသောအံဆွဲများပါ ၀ င်သည်။၇။ လှပသောရိုးရာဒီဇိုင်း၊ အရောင်နှစ်ရောင်အရောင်၊ AIX အပိုင်းအခြား။